Warar goos-goos ah oo ku saabsan dalka itoobiya |
(1) Golaha fadareeshinka dawlada itoobiya ayaa gudi madax banaan usaaray xal u helida khilaafka kusaabsan arimaha “Isirka/ ya maaninat diyaaqee” gaar ahaan arinta Raaya iyo Wal-qayt ee deegaanka Tigreega. Afhayeenka golaha fadaraalka marwo Kayriya Ibrahim oomaanta uwaramaysay TV ga qaranka ee EBC ayaa sheegtay in xubnaha gudigan madaxa banaan laga soo kala xulay deeganada Oromia iyo Shucuubta koonfureed iyo waliba jaamacadaha dalka kuwaasoo khibrad dheer uleh xalinta khilaafaadka la xidhiidha isirka ama qowmiyadeed kuwaasoo si toos ah ula xidhiidhi doona bulshada degan goobahaas khilaafku ka jiro iyagoon shuqul ku darsanin maamulada labada deegaan ee Tigreega iyo Axmaarada xogta ay keenaana lagu go’aan qaadan doono.
(2) Codsigii qowmiyada Sidaamo ay mudada dheer ee 27 sano ah ay ku doonayeen deegaan iyaga ugaar ah ood moodo inay xiro guul ugu jiraan hanasha guushii ay inbadan ku taamayeen. Hada kahor ayay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen golaha xildhibaanada gobolka ay dagto qowmiyada sidaamadu inay noqdaan deegaan gaar ah oo kamadax banaan kililka shucuubta koonfureed ee dalka itoobiya codsina u gudbiyeen golaha xildhibaanda heer deegaan si uu uga caawiyo dhamaystirka arintaas. Hadaba kalafadhi uu yeeshay golaha xildhibaanada deegaankaasi oo maanta lasoo gabogabeeyay ayaa lagu go’aamiyay in gudi ka kooban; heer gobol, heer deegaan iyo heer fadaraal loo xilsaaro sidii afti looga qaadi lahaa bulshada kunool gobolkaas go’aan rasmi ahna lagaga gaadho arintan muddo hal sano gudaheed ah.
(3) Dhalin yarada kunool magaalada Diri dhaba gaar ahaa kuwa axmaarada ah ayaa cabasho shaqo la’aaneed sheegtay mar ay maanta la hadleen TV ga qaranka ee EBC da. Dhalinyarada ayaa ku eedeeyay maamulka Diri dhaba arimo maamul xumo, iyo inayna dhag’ jalaq’ u siinin cabashadooda ku saabsan camal la’aanta. Magaalada diri dhaba ayaa lagu qiyaasaa tirade dadka kunool inay tahay 600,000 kuwaasoo ka soo kala jeeda intoodan qowmiyadaha kala duduwan ee dalka itoobiya. Waxaana ugu kur-kur roon qowmiyadaha; soomaalida, oromada, axmaarada, Hararida iyo uraagada. Maamulkeedana waxaa ku mool-kaysta soomaalida iyo oromada, saami-qaybsiguna waa 40-40-20 soomaali-oromo-iyo kuwa kale. Qowmiyada axmaarada ayaa baryahan dambe ol-ole ugu jirtay inay xuquuq quman ka hesho magaalada si wayna uga soo hor jeeday nidaamka saami-qaybsiga ee 40-40-20 ah. Arintan ayaad moodaa inay tahay “oohintu orgiga ga wayn”.
(4) Koriinkii dhaqaalaha dalka itoobiya ee sanad laha ahaa oo maanta la shaaciyay ayaa lagu sheegay inuu hoos u dhac ku yimid sanidkii hada dhamaaday ee 2010 T.I. Qorshaha ayaa ahaa in koriinka sanadkaasi noqdo 11.1% laakiin uu noqday ama la gaadhay 7.7%. wakaalada shaacisay ayaa sheegtay in ilaha dhaqaale ee uu ka yimid kobocan dhaqaale uu yahay; (1) sector ka adeeg bixinta 3.3%, (2) sector ka warshadaha iyo dhismaha 3.1% iyo (3) sector ka beeraha 1.3%. waa la filayay inuu hoos u dhac ku iman doono koriinka dhaqaalaha dalka ee sanadkii dhamaaday maadaama ay rabshado iyo kacdoono bulsho dalka taasoo hakad galisay isu socodkii dhaqdhaaqii ganacsiga.
(5) Hogaaminta ugu saraysa madhabta ama kiniisada Orthodox ka ee dalka itoobiya ayaa maalintii shalay soo saartay baaq/hadal murtiyeed kaasooy ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xaalada amniga ee daloku ku suganyahay wakhti xaadirkan oo hadii aan si degdeg ah wax looga qabanin uu gali doono dalku marxalada adag oon waxba laga qabankarin. Waxay ku war galiyeen dhamaan kiniisadaha orthodox ka ah ee dal iyo dibadba kuyaala in laga sameeyo alla-bari loogu ducaynayo dalka, dawladana waxay ugu baaqeen inay si degdeg ah uga hawl gasho wax kaqabadka iyo sugida amnigta dalka.
By: Shafici Dahir